समयमा, सतहहरु, भयानक बाङ्गो पर्खालहरु सम्बन्धित प्रत्येक, तेल रंग को गाढा रंग को एक पत्र ढाकिएको चित्रित। उत्तिकै अप्रिय, तिनीहरूले अपार्टमेन्ट र आवासीय क्षेत्रमा देख्यो। अपार्टमेन्ट मालिक सबै हालतमा एक फोहोर हरियो र विषालु नीलो सतह वालपेपर र फोम गर्न टाँसिएको, यो "सौन्दर्य" को हटाउनु प्रयास गरेका छन्, र विशेष गरी दक्ष बस तिनीहरूलाई बंक भरी। त्यसपछि प्रारम्भिक नब्बे मा, स्टोर अभूतपूर्व र अज्ञात सोभियत मानिस भवन निर्माण सामाग्री देखा पर्न थाल्दा, विभिन्न रंग को लेटेक्स रंग संग पर्खालहरु रंग गर्न थाले। यसलाई सुशील थियो र प्रतिष्ठित छैन, लगभग हरेक दोस्रो व्यक्ति मात्र यस्तो समाप्त अपार्टमेंट वा धनी घर को भित्री गर्नेछ विश्वास गर्छन्। तर, पानी आधारित रंग संग painting लागि योग्य तयारी पर्खालहरु रूपमा यस्तो प्रश्न विशेष छलफल गरिएको छैन। हालसम्म परिणाम हामी चाहनुहुन्छ रूपमा, सधैं त थिएन। र समाप्त यस प्रकारको हुन थाले देखि बिस्तारै, भन्डार Vinyl पहिले नसुनिएका र थिए थप त किनभने असाधारण सौन्दर्य र अनौठो रंग को वालपेपर गैर-बुना। वास्तवमा, यी कुराहरू, यो सानो भ्रमण को लागि? र वास्तवमा वर्तमान मा कोलोरेसन् लोकप्रिय फेरि बन भनेर। र एक पूर्ण बिभिन्न फारममा, रूपमा बाहिर छ नवीनतम सामाग्री र आधुनिक प्रविधिहरू प्रयोग प्रयोग गरेर। र कोठा जस्तै खत्म यस प्रकारको पूरा गर्न योजना छ भने पर्खालहरु painting, सतह तयारी मुख्य र निर्णायक चरण हो। र यो सबै निम्न पाठ समर्पित हुनेछ यो प्रक्रिया छ। हामी के छ बारे धेरै विवरण बताउन प्रयास गर्नेछ चित्रकला अघि पर्खाल को तयारी। प्रक्रिया काम गर्छ, आफ्नो आचरण सबै nuances र विशेषज्ञहरु को सल्लाह - यो सबै पछि।
रंग हुन सतह प्रकार
त्यसैले, के पर्खालहरु यसरी समाप्त गर्न सकिन्छ? सिद्धान्त मा, लगभग कुनै पनि। तर दृश्य को एक पेशेवर बिन्दु, यस बिन्दुमा यो रंग गर्न उचित छ: plastered सतहहरु, आधार यो सामाग्री को लागि अभिप्रेरित बनेको otshpaklevannye वा राम्रो (चित्रकला लागि वालपेपर, steklvolokno, आदि ...), Textured र Textured प्लास्टर, plasterboard तदनुसार तयार बाटो।
सतह को प्रकारको आधारमा समाप्त विषय हुनेछ, र चित्रकला पर्खालहरु लागि तयार भइरहेको। केही चरणमा काम प्रत्येक प्रकार को विशेषता हो, र एक विशेष मामला केही सबै लागू वा, वा प्रत्येक अन्य संग संयुक्त छन्।
चित्रकला को लागि पर्खाल को तयारी को लागि प्रक्रिया
यो सामान्यतया एक क्रमिक प्रक्रिया हो। पहिलो, यो सतह तयार गर्न आवश्यक छ। त्यसपछि align - प्लास्टर वा plasterboard वा। कि पछि, एक फिलर वा सजावटी प्लास्टर को परिष्करण। त्यहाँ पनि पर्खाल मा स्टिकर पहिले नै चित्रकला वा फाइबर सिसा लागि वालपेपर otshpaklevannye रूपमा, एक विकल्प छ। यी प्रक्रिया दुवै पनि परिष्करण लागू हुन्छ। त्यसपछि - विस्तृत बारेमा प्रत्येक मामलामा painting अघि पर्खाल को तयारी।
र हामी एक नियम रूपमा, सबै अवस्थामा, वस्तुतः समान छन् जो, को प्रिपेरेटरी प्रक्रियाहरु, सुरु।
चित्रकला लागि पर्खाल तयार धेरै होसियार दृष्टिकोण आवश्यक छ। र यो किनभने यो अन्त परिणाम मा सम्पूर्ण निर्भर छ मुद्दा, सबै जिम्मेवारी भेट्नुपर्छ गर्न आवश्यक छ। यसरी, पर्खाल पहिलो पुरानो finishes खाली गर्नुपर्छ। यो वालपेपर भने, तिनीहरूले हटाइएको र पूर्ण हुनुपर्छ। यो तेल रंग र लेटेक्स, छ भने यो पनि whitewash उल्लेख छैन, को छुटकारा प्राप्त गर्न देखि। कि पछि, यो पर्खाल को एक राम्ररी अडिट सञ्चालन गर्न आवश्यक छ। सबै को पहिलो, आफ्नो निष्ठा जाँच गर्नुहोस्। उत्कृष्ट - तिनीहरूले पहिले plastered गरिएको छ भने, समाधान को तह टिकाउ र राम्रो पर्खाल मा राखिएको छ। त्यहाँ उहाँले शाब्दिक हल्लाउने हिँड्छ जहाँ एक ठाउँमा छ भने - उनि स्पष्ट हुनुपर्छ र कमजोरीहरू ताजा समाधान संग मरम्मत। को क्षति सतह को 40 भन्दा बढी प्रतिशत छ भने, यो मुद्रा बुद्धिमानी र पर्खाल पूर्णतया हटाइयो, सबै पुराना प्लास्टर हुन छैन सिफारिस गरिएको छ।
तपाईं अन्त मा एक ठोस जग छ भनेर पत्ता लगाउन एक पटक, तपाईं प्राइमर गर्न तयार छन्।
एक सानो digression
मर्मत कार्य को एक रोचक सुविधा - कहिलेकाहीं तयारी प्रक्रिया लगभग अब पछि सम्पूर्ण प्रक्रिया भन्दा लिन्छ छ खत्म। कहिलेकाहीं केही पर्खाल कागज वालपेपर संग मिलिमिटर द्वारा शाब्दिक मिलिमिटर हटाउन छ, र उल्लेख गर्न तेल रंग को हटाउनका लागि प्रक्रिया कसरी कठिन। त्यसैले, तपाईं यसलाई चित्रकला लागि तयारी पर्खालहरु को प्रिपेरेटरी चरण पछि प्रदर्शन गर्नुपर्छ बारे कुरा गर्न जारी गर्नु अघि, हामी तपाईंलाई अनुभव कारीगरों देखि केही सुझाव दिन चाहन्छु। शायद उनि कसैले द्रुत फोहोर र कठिन काम सामना गर्न मद्दत गर्नेछ।
वालपेपर कसरी हटाउने
कहिल्यै तिनीहरूले सुक्खा फारममा, पर्खाल गिर छैन भने, पाठ्यक्रम, पुरानो वालपेपर हटाउन। कागज दृढ प्लास्टर गर्न फँस गर्दा, तपाईं मात्र आधार गरेर आधार कहिलेकाहीं यसलाई हटाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले न्यानो पानी र एक ब्रश (एक रोल!) संग शाखा बाल्टिन अनि पर्खाल गीला गर्न सुरु गर्नुहोस्। र एक पटक, दुई पटक, तर शाब्दिक लगभग हरेक 15 मिनेट। मलाई विश्वास - तपाईँको हार्ड काम पुरस्कृत गरिनेछ। केही बिन्दु मा, वालपेपर बबल गर्न सुरु हुनेछ, र पर्खाल राख्न अप। तपाईं बस यो सानो सहयोग रहनुहोस्।
रंग को छुटकारा प्राप्त गर्न कसरी
यो एउटा सानो स्पाटुला को पर्खालहरु देखि रंग हटाउन प्रयास गर्न अनुपयुक्त छ। राम्ररी यो उद्देश्य लागि विशेष सिर्जना, प्याडल संग ड्रिल लिन र उपकरण सञ्चालन बस। मात्र कुरा के तपाईं प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ कि - त्यसैले यो उच्च गुणस्तरीय पानी आधारित पेंट, पानी-dampened स्पन्जले हटाउन छैन। तथापि, तपाईं एक ठूलो सतह तयार छ भने, यो सम्भव तपाईं पर्खालहरु धुन हुनेछ कति कल्पना छ।
कहिल्यै रोलर priming, केही सल्लाह बाबजुद लागू। एकै समयमा उनको धेरै जो, प्रसंगवश, एकदम गाह्रो त्यसपछि सुकेको संरचना देखि साफ छ तल, मा हुनेछ। सबै भन्दा राम्रो विकल्प - बन्दूक, पनि पोर्टेबल। यदि यो छैन - एक ब्रश काम। मात्र तरिका के तपाईं साँच्चै गुणस्तरीय आधार तयार र यसको भित्री तहहरूमा एक प्राइमर प्रवेश प्रदान गर्न सक्छन्।
मूल पर्खाल चिल्लो छ भने, यो बाँचे प्लास्टर मा, दोष, तपाईं खत्म सुरु गर्न सक्नुहुन्छ प्याचगरिएको। के यो हुनेछ - luting वा सजावटी प्लास्टर को सतह कोटिंग - काम प्रकार मा निर्भर गर्दछ। कुनै पनि मामला मा, चिल्लो पर्खालहरु पहिले नै चित्रकला लागि तयार गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को कुरा, तिनीहरूले भङ्ग गर्दै हुनुहुन्छ भने तिनीहरूलाई संग सम्झौता असम्भव छ। यस्तो अवस्थामा यो Drywall ध्यान उचित छ। यो बस र चाँडै हुन सक्छ सतह चिकनी। तर, त्यसपछि पनि चित्रकला लागि तयार छ, तर हामी तल वर्णन गर्नेछ।
सबै पुरानो प्लास्टर यदि तपाईं मेटिएको छ, र तपाईं को सामने - यो खुला ठोस वा ईटा पर्खाल बेकन प्रयोग गरेर प्लास्टर समाधान पंक्तिबद्ध हुनेछ। यो सबैभन्दा प्रभावकारी विधि भनेर अन्त मा प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ साँच्चै समतल सतह छ।
तपाईं Drywall चयन भने
पर्खाल मा FCL स्थापना गर्ने बारे कुरा, हामी हुनेछ। यो हाम्रो कार्य छैन। तर के चित्रकला लागि plasterboard पर्खालहरु को तयारी छ बारे केही शब्द भन्न, यो आवश्यक छ। सारा बिन्दु सीधा GCR कुनै वालपेपर मा, कुनै रंग संरचना लागू छैन भन्ने छ। तिनीहरूले निश्चित पूर्व-पुटीन राम्ररी सफा गर्न र primed, र त्यसपछि मात्र रंग छ आवश्यक छ।
सायद यो चित्रकला को लागि पर्खाल तयार छ जो मास्टर, लागू गर्न आवश्यक छ, जो सबै भन्दा जटिल प्रक्रिया हो, छ। तथ्यलाई सतह मात्र होइन फ्लैट, तर पनि पूर्ण चिल्लो हुनुपर्छ भन्ने छ। को slightest दोष, सबै भन्दा सानो खरोंच रंग dries पछि दृश्यात्मक हुनेछ। र यो प्राप्त गर्न, यसलाई आवश्यक दुई चरणमा प्रक्रिया प्रदर्शन हो। पहिलो, फफोला तह पहिलो लागू गरिएको छ। एक पटक यो राम्ररी सुकेको छ, यो सबै धक्का बाहिर चिकना गर्न जाल वा स्यान्डपेपर मार्फत जानु पर्छ। र त्यसपछि राम्ररी primed र फेरि सुकाउने लागि प्रतीक्षा गर्नुहोस्। र त्यसपछि पूर्ण अवस्थित कमजोरीहरू बंद जो पुटीन, को पातलो परिष्करण पत्र लागू हुन्छ। एउटै मामला मा, केही सानातिना अनियमितताहरु अवस्थित भने, उनीहरूले राम्ररी रंग भन्दा, त्यसपछि सारा सतह र primed रहे-सफा हुन सक्छ। त्यसपछि एक दिन staining लागि अगाडि बढ्न अनुमति दिएको छ।
प्रशिक्षण को पर्खालहरु अन्तर्गत सञ्चालन गरिएको छ भने चित्रकला लागि वालपेपर, यो मामला मा, अर्थमा बनाउन गर्दैन हासिल गर्न आदर्श सतह। हो, यो, चिल्लो पर्याप्त चिल्लो हुनुपर्छ, तर अझै पनि सानातिना कमजोरीहरू हुन सक्छ। मुख्य कुरा हो - एक साँच्चै ठोस जग प्राप्त गर्न। आफूलाई, चित्रकला लागि वालपेपर नियम, विन्दु, र यसैले खरोंच को सबै प्रकार बस तिनीहरूलाई अन्तर्गत लुकाउन रूपमा रूपमा। अवलोकन हुनुपर्छ भनेर मात्र नियममा spackling समयमा जो मार्फत प्लास्टर rayed पातलो पुटीन को, तह संग क्षेत्रहरु छोड्न सिफारिस गरिएको छैन भन्ने तथ्यलाई छ। सारा प्रक्रिया पूरा जो वालपेपर बिना चित्रकला पर्खालहरु लागि तयारी आवश्यक नै हेरविचार, संग हुनु आवश्यक छ। बस सानातिना कमजोरीहरू मा काट गर्न सक्नुहुन्न। तिनीहरूले देखिने छैनन्। बाँकी, कुनै फरक छ। पूरा पुटीन कोटिंग साफ र माटो ढाकिएको छ। यो dries पछि, तपाईं वालपेपर झुन्डियो सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरूलाई पछि टाँस्न कम्तिमा दिन चार भन्दा पहिले रूपमा रंग। तिनीहरूलाई सुक्खामा समय दिनुहोस्। अन्यथा, अन्तमा रंग को प्रभाव अन्तर्गत तिनीहरूले भिजेको प्राप्त र पर्खाल बन्द peeling हुनेछ।
त्यहाँ कुरा गर्दा बेवास्ता गर्न सकिँदैन भन्ने अर्को विवाद छ कसरी चित्रकला को लागि पर्खाल तयार। यस्तो फाइबर सिसा रूपमा सामाग्री को प्रयोग। व्यवसायी यो फाइबर सिसा रंग कल। यसमा - थप।
तपाईं किन चाहिन्छ? र सतह पूर्ण चिल्लो बनाउन र यसलाई खुर देखि सुरक्षाको लागि। त्यसपछि लामो समय सतहमा देखा गरेको सबै दोष, ग्लास फाइबर अन्तर्गत लुकेको गरिनेछ किनभने तिनीहरूले कुनै दबाव र तापमान परिवर्तन डर रूपमा, एक भव्य उपस्थिति तपाईंलाई प्रसन्न हुनेछ लागि ग्लास पर्खालहरु संग एक रंग टाँसियो। सोही, उत्तरार्द्ध छ र नालीदार र बाक्लो पर्याप्त र धेरै पातलो, पारदर्शी कपडा शाब्दिक। यो पनि spiderweb भनिन्छ। यो एक गिलास शाब्दिक मुद्रा लायक छ, यस प्रकारको, सबै भन्दा लोकप्रिय छन्, देखि पहिले छ, र दोश्रो कुरा, यो काम गर्न सजिलो छ।
प्रक्रिया बारे केही शब्द। पहिलो पर्खाल puttied। मात्र एक, फफोला पत्र लागू गर्न। त्यसपछि यो साफ र primed गर्नुपर्छ। माकुराको जालो र विशेष गोंद पेस्ट गर्नुहोस्। तपाईंलाई गर्न सक्छन् वालपेपर गैर-बुना लागि संरचना। ग्लास सुकाएपछि फेरि धेरै पातलो तह puttied, र यो प्रक्रिया धेरै सरल र छिटो छ। पर्खालहरु priming पछि चित्रित गर्न सकिन्छ।
Textured प्लास्टर को र
यो सजावटी प्लास्टर को पर्खालहरु painting लागि तयारी छ भने, luting रूपमा यस्तो प्रक्रिया सबै आवश्यक छैन। बनावट समाधान तयार कुनै न कुनै आधार सीधै लागू गरिन्छ सुकाएपछि primed, र त्यसपछि रंगा छ।
को 2nd तल्ला मा देशमा आफ्नो हात संग joists, एक निजी काठ घर मा प्लाईवुड को फर्श,
Tsvetaeva स्याउ पाइ: एक विस्तृत नुस्खा
एक उच्च गुणस्तरीय महिला चड्डी छनौट
विरोधी चोरी एसईओ साइटहरु लागि विधिहरू
को "Maynkraft" मा अन्य teleport कसरी विवरण